Tsy Voafehy Intsony ve Izao Tontolo Izao? Inona no Lazain’ny Baiboly?
Tsy ho potika ny tany amin’ilay ora eritreretin’ny mpahay siansa, satria mampanantena hoavy tsara Andriamanitra
EFA ela ny Baiboly no niresaka momba ny zava-dratsy misy ankehitriny. Noresahiny koa anefa ny hoavy tsara miandry ny olombelona. Betsaka ny zavatra noresahin’ny Baiboly efa tanteraka amin’ny an-tsipiriany, ka tsy tokony holavina avy hatrany izay lazainy.
Diniho, ohatra, ireto faminaniana ireto:
“Hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hamely fanjakana. Ary hisy mosary sy horohoron-tany any amin’ny toerana samy hafa.”—Matio 24:7.
“Amin’ny andro farany, dia hisy fotoan-tsarotra tsy mora setraina. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho matin-kambo, hanambony tena, ho mpanevateva, tsy hankatò ray aman-dreny, tsy hisaotra, tsy ho mena-mivadika, tsy ho tia ny mpianakaviny, tsy ho azo ifanarahana, ho mpanendrikendrika, tsy hahafehy tena, ho masiaka be, tsy ho tia ny tsara, ho mpamadika, ho be di-doha, ho mpieboebo, ho tia fahafinaretana fa tsy ho tia an’Andriamanitra.”—2 Timoty 3:1-4.
Mety hisy hilaza hoe: “Tsy voafehy mihitsy izao tontolo izao, ary vao mainka aza miharatsy!” Marina izany raha jerena ireo faminaniana ireo. Tsy voafehin’ny olona tokoa ny tontolo misy antsika. Milaza mantsy ny Baiboly fa tsy manana ny fahendrena sy ny hery hitondrana vahaolana maharitra ny olombelona. Izany no asongadin’ireto andinin-teny ireto:
“Misy lalana heverin’ny olona ho mahitsy, nefa any amin’ny fahafatesana no iafaran’izany.”—Ohabolana 14:12.
“Tsy natao hitondra samirery ny fiainany ... ny olona.”—Jeremia 10:23.
Ho potika izao tontolo izao raha mbola manao izay saim-pantany ny olona. Soa fa tsy hitranga izany! Hoy mantsy ny Baiboly:
“[Naorin’Andriamanitra] ny tany, ary nataony mafy orina ny fototra iorenany, ka tsy ho voahozongozona mandrakizay doria.”—Salamo 104:5.
“Lasa ny taranaka iray, ary mandimby ny taranaka iray, fa ny tany kosa maharitra mandrakizay.”—Mpitoriteny 1:4.
“Ny olo-marina no handova ny tany, ka honina eo mandrakizay.”—Salamo 37:29.
“Hahavokatra be ny tany, ary na eny an-tampon-tendrombohitra aza dia ho be ny vokatra.”—Salamo 72:16.
Mazava ireo andininy ireo. Tsy ho ripaka ny olona na dia maloto aza ny tontolo iainana, tsy ampy ny sakafo sy rano, ary mihanaka ny aretina. Tsy ho potiky ny ady niokleary koa ny tanintsika. Voafehin’Andriamanitra mantsy ny hoavin’ny tany. Marina fa nomena safidy ny olona, nefa izy ireo ihany no hizaka ny vokatry ny fanapahan-keviny. (Galatianina 6:7) Tsy toy ny fiara tapaka fihisatra izao tontolo izao, ka hoe tsy voafehy intsony fa hivarina any an-kady. Tsy avelan’Andriamanitra hanao zavatra tafahoatra, izay hanimba ny tenany, ny olombelona.—Salamo 83:18; Hebreo 4:13.
Ankoatra izany, dia hataon’Andriamanitra izay hisian’ny “fiadanam-be.” (Salamo 37:11) Vao santionany amin’ilay hoavy tsara resahin’ny Baiboly ny fanazavana hitantsika tato. Vavolombelon’i Jehovah an-tapitrisany no nahafantatra an’ireo rehefa nianatra Baiboly.
Misy lehilahy sy vehivavy samy hafa taona sy fiaviana ny Vavolombelon’i Jehovah. Mivavaka amin’i Jehovah, ilay tena Andriamanitra resahin’ny Baiboly, izy ireo. Tsy matahotra ny hoavy izy ireo, satria hoy ny Isaia 45:18: “Izao no nolazain’i Jehovah, ilay Mpamorona ny lanitra, Ilay tena Andriamanitra, ilay Mpamolavola ny tany sy Mpanao azy, Ilay nanao azy ho mafy orina, ary tsy hoe tsy misy antony ny namoronany azy fa nataony honenana: ‘Izaho no Jehovah, ary tsy misy hafa.’”
Noresahina tato ny zavatra sasany ampianarin’ny Baiboly momba ny hoavin’ny tany sy ny olombelona. Miresaka bebe kokoa momba izany ny lesona 5, amin’ny bokikely Vaovao Tsara Natao ho Anao! Navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah izy io, ary azo alaina ao amin’ny www.jw.org/mg
Azonao jerena koa ilay video hoe Inona no Antony Namoronan’Andriamanitra ny Tany? ao amin’ny www.jw.org/mg. (Jereo ao amin’ilay hoe ZAVATRA MISY > VIDEO)
Miresaka an’ireo zavatra hitranga alohan’ny faran’ity tontolo ity ny Baiboly.